Indian Visa ekwi-Intanethi
Inqaku elilandelayo »
Uyifumana njani i-Visa yase-Indiya kwi-Intanethi?
Umgaqo-nkqubo we-visa wase-India isoloko ivela kwaye ihamba ngendlela eya ngokwandayo kwesi sicelo kunye nejelo elikwi-Intanethi. IVisa ukuya eIndiya yafumaneka kuphela kwi-Indian Mission yase-India okanye kwi-Ambassia yaseIndiya. Oku kuguqukile ngokuxhaphaka kwe-intanethi, iifowuni ezi smart kunye neendlela zonxibelelwano zanamhlanje. I-Visa eya e-India ngenxa yeenjongo ezininzi ngoku iyafumaneka kwi-intanethi.
Ukuba ucwangcisa ukutyelela e-India, yeyona ndlela ilula apply online.
I-India ineeklasi ezininzi ze-Visa ngokusekwe kwisizathu sokuba undwendwe luvele, oko kukuthi, ubuzwe babo kunye nenjongo yokuba undwendwe lujonge ukuza. Ke, ezi zinto zimbini zigqiba ukuba uyakufanelekela ukufumana i-Visa yase-Indiya kwi-Intanethi. Ezi zimbini zezi:
Ubumi / Ubumi kwipaspoti, kunye
Injongo okanye injongo yokuhamba
Iikhrayitheriya zobumi base-Indian Visa kwi-Intanethi
I-India inezi ndidi zilandelayo zeeVisa ngokusekelwe kubumi bomhambi:
Amazwe aseVisa asimahla afana neMaldives neNepal.
Visa Kwokufika kwamazwe ixesha elincinci kunye neenqwelomoya.
Amazwe e-eVisa India (ummi a Amazwe angama-180 afanelekile yeIndiya ekwi-Visa ye-Intanethi).
Iphepha okanye iVisa yesiNtu amazwe afunekayo.
Ukucaciswa korhulumente kwafuneka amazwe anjengePakistan.
Eyona ndlela ilula, ethembekileyo, ekhuselekileyo nethembakeleyo yokwenza isicelo kwi-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye e-India ye-eVisa efumanekayo phantsi kwezi zigaba zibanzi, I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya, I-Visa yeIndiya yeShishini, I-visa yezonyango eIndiya kwaye I-Visa yeNdawo yoNyango ye-India.
Unokufunda ngakumbi kwiindidi zeVisa zaseIndiya Apha.
Iinjongo ze-India Visa kwi-Intanethi
Ukuba uphumelele uvavanyo lokuqala kwaye ulungele ukufumana iVisa yase-Indiya ye-elektroniki kwi-intanethi okanye kwi-eVisa yaseIndiya, emva koko unokujonga ukuba ingaba injongo yakho yokuhamba iyakulifanela na iVisa yase-Indiya ye-elektroniki.
Ungajonga ukuba ukulungele na ukufaka isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi. Ukuba injongo yakho kukukhetha enye yezi zinto zikhankanywe ngezantsi, ungafaka isicelo kule Visa ukuya eIndiya.
Uya kwiNkqubo yeYoga.
Ukuba unomdla wokundwendwela e-India ngazo naziphi na iinjongo ezichazwe apha ngasentla, unganako Faka isicelo se-visa e-India phantsi kodidi lwe-eVisa India abakhenkethi.
Ukuba injongo yakho yenye yezi zinto zilapha ngezantsi, ke uya kulungela ne-eVisa India (phantsi kodidi lweShishini) kwaye ufake isicelo kule webhusayithi ye-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi.
Injongo yotyelelo lwakho ukuze usete umzi mveliso.
Uza kuqalisa, ukulamla, ukugqiba okanye ukuqhubeka neshishini.
Utyelelo lwakho kukuthengisa into okanye inkonzo okanye imveliso eIndiya.
Ifunwa imveliso okanye inkonzo evela Indian kwaye unqwenela ukuthenga okanye ukuthenga okanye ukuthenga into evela India.
Ufuna ukwenza imisebenzi yorhwebo.
Kuya kufuneka uqeshe abasebenzi okanye usebenze eIndiya.
Uya kwimiboniso okanye kwiilwimi zorhwebo, imiboniso yorhwebo, iingqungquthela zeshishini okanye ingqungquthela yeshishini.
Usebenza njengengcali okanye uchwepheshe weprojekthi entsha okanye eqhubekayo eIndiya.
Ufuna ukwenza ukhenketho eIndiya.
Unayo i-lecure / s yokuhambisa kutyelelo lwakho.
Ukuba nayiphi na kwezi njongo sele isebenza apha kuwe, uya kulungelwa ukuba ube yi-eVisa India kwaye ufanelekile faka isicelo seVisa yaseIndiya kule webhusayithi.
Ukongeza, ukuba unomdla wokundwendwela eIndiya ukuze ufumane unyango, unokufaka isicelo se-Visa Online yaseIndiya kule webhusayithi. Ukuba ufuna ukuhamba nesigulana, yenza njengomongikazi okanye umntu oxhasayo, ungafaka isicelo se-visa ukuya e-India phantsi kodidi lwe-Medical Attendant kule webhusayithi.
UNGALUNGELELANI ukuba ufumane i-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi?
Kukho iimeko apho ufaneleke phantsi kwezi ndlela zombini kodwa usenokunganikwa i-eVisa India okanye i-Indian Online visa ukuba oku kuyasebenza apha ngezantsi.
Ufaka isicelo phantsi kwepasipoti yokundwendwela endaweni yepaspoti eqhelekileyo.
Uceba ukwenza imisebenzi yobuntatheli okanye wenze iifilimu eIndiya.
Uza kushumayela okanye umsebenzi wobufundisi.
Uza kutyelelo lwexesha elide ngaphezulu kweentsuku ezili-180.
Ukuba nayiphi na kwezi zinto zangaphambili isebenza kuwe kuya kufuneka ufake isicelo sephepha eliqhelekileyo / i-visa eqhelekileyo yase-India ngokundwendwela i-Indian Embassy / iOfisi yeIndiya okanye iKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya.
Zithini izithintelo eIndiya iVisa kwi-Intanethi?
Ukuba ulungele i-eVisa Indian kwaye uthathe isigqibo sokufaka isicelo se-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi, ke kuya kufuneka uqaphele ukulinganiselwa.
I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye e-India ye-eVisa ifumaneka kuphela kwiindawo ezintathu ezenzelwe iinjongo zabakhenkethi, usuku lwe-30, unyaka omnye kunye neminyaka emi-1.
I-Visa yase-Indiya ekwi-Intanethi ifumaneka kuphela ixesha elingu-1 lonyaka ngeenjongo zeshishini.
I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya iyafumaneka ngeentsuku ezingama-60 ngeenjongo zonyango. Ivumela amangenelo amathathu ukuya eIndiya.
I-Indiya iVisa kwi-Intanethi ivumela ukungena kwiindawo ezibekiweyo kumazibuko okungena ngenqwelomoya, izikhululo zeenqwelo moya ezingama-28 kunye nezibuko ezi-5bona uluhlu olupheleleyo apha). Ukuba ucwangcisa ukundwendwela e-India ngokwendlela, ke akufuneki ufake isicelo se-visa ukuya e-India usebenzisa le webhusayithi.
I-eVisa India okanye i-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi ayifanelanga ukutyelelwa kwiindawo zokugcinwa komkhosi. Kuya kufuneka ukuba ufake isicelo sePemithi yeNdawo eKhuselweyo kunye / okanye iPemethe yeNdawo esiThintelweyo.
I-Visa ye-Elektroniki ye-India yeyona ndlela ikhawulezayo yokungena eIndiya ukuba ucwangcisa utyelelo ngenqwelomoya okanye umoya. Ukuba ungomnye wamazwe ayi-180 afanelekileyo e-eVisa India kwaye uchaze iinjongo zemidlalo njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ungafaka isicelo kwi-India Visa kwi-intanethi kule webhusayithi apha.